Ny famoronana 10 mety hanova ny ekolojia - Afrikhepri Fondation
zoma 16 aprily 2021
Fifandraisana TONTOLO IAINANA
Ireo famoronana 10 afaka mamadika ny tontolo iainana
Vakiteny: 10 min
Ny angovo fotovolana, turbines, fiara hybrid… any Frantsa, zara raha midina ireo fanavaozana ireo. Ao amin'ny Silicon Valley dia efa nisy hatrizay, ary miasa ny "mpikaroka teknolojia maitso" vaovao hampihenana ny fanjifana herinaratra ataontsika. Rue89 dia manao lisitra tsy feno momba ireo zavatra noforonina nahagaga indrindra, nalaina avy tamin'ny boky "Revolution Green: Investigation in Sillicon Valley" nataon'i Michel Ktitareff, izay hita amin'ny 7 Oktobra ao Dunod.
Satelita hitandro ny tany
Na dia midika hoe fampiasana angovo masoandro hamoronana herinaratra aza ianao dia mety hahazo izany amin'ny loharano. Ny Solaren start-up, efa manam-pahaizana manokana amin'ny photovoltaics, noho izany dia mikasa ny hametraka, amin'ny 2016, ireo satelita misy valin'ny masoandro.
Ny tanjona dia ny tsy hampandeha ireo mikrô amin'ny onjampeo iraisampirenena, fa ny hampifandray ireo tontonana amin'ny hemisphere antsika amin'ny alàlan'ny onjam-peo. Tompon'andraikitra amin'ny fanovana azy ho hafanana avy eo ny tobin'ny tany, avy eo lasa herinaratra.
Fitaovan'ny Nano hamonjy rano
Ny famoahana rano dia fahavalon'ny tontolo iainana toy ny faktiora ihany. Mba hitehirizana ny loharanon'ny rano velona ao amin'ny planeta, ny mpikaroka dia mamorona sensor izay tsy ho hitan'ny maso mitanjaka hapetraka ao am-pon'ny fantsona.
Amin'ny dingana sarotra iray izay mahatonga azy ireo ho mora mihetsiketsika amin'ny feo, dia mety ho afaka hampita amin'ny antsipiriany ny momba ireo fiovan'ny rano fisotroan-dronono ireo mpamantatra ireo. Tena tsara raha misy fery.
Ireo sensor ireo dia mifanaraka amin'ny Smart grids (ara-bakiteny "grids maranitra"), ireo fitaovana ireo izay mampiasa rafitra fampahalalana toa ny Internet mba handrindrana ireo karazany tambajotra samihafa, dia mety ho elektronika, lalana na tambazotra solosaina.
Faritra hafa fampiharana ny "teknolojia marani-tsaina" ("teknolojia marani-tsaina"), làlambe any Kalifornia, izay ahitana betsaka ireo tsindry ireo apetraka eny an-dalana. Ankoatry ny zavatra hafa, avelany hanisa ny isan'ireo fiara mandalo izy ireo, ary noho izany dia mametraka ny sarintanin'ny fifamoivoizana marina amin'ny sehatra voasarona.
Raha ampifandraisin'ny satelita amin'ny boaty manokana miposaka eo amin'ny sotron'ny fiara dia afaka mitarika ny mpamily ara-potoana izy ireo raha sendra fitohanan'ny fifamoivoizana, lozam-pifamoivoizana na ny toy izany. Amin'ny farany, miteraka fitehirizana angovo kely io ... ampitomboin'ny mpampiasa maro be.
Toe-panandramana manify sy manify toy ny taratasy
Niteraka resabe lehibe tokoa ny vaovao: Google manarona tanteraka ny tafon-tranony panneaux solaires, tamin'ny taona 2007. Hahafahany manarona ny solo-sain'izy ireo amin'izy ireo ve? Smino ny orinasa Nanosolar aho (na ny mpifaninana aminy Miasolé sy Solexant), azo atao izany.
Ireo fanombohana ireo dia mitady ny hampihenana araka izay azo atao ny hatevin'ny takelaka (ireo izay amidy androany dia mety hahatratra 1 cm) noho ny teknolojia CIGS (ho an'ny "varahina, indium, gallium ary selenium", ny anaran'ireo singa ao amin'ilay fitaovana. ). Ny zavatra farany dia tsy ho matevina noho ny taratasy.
Raha mahavita mamorona an'ity fanavaozana ity amin'ny sehatra marobe izy ireo, izay mbola tsy azo antoka, dia azo atao tsara ny mametaka ireo sarimihetsika ireo na aiza na aiza toa ny sarimihetsika plastika. Aleo ivelan'ny tranony.
Mpizara solosaina "off Coast"
Araka ny fanadihadiana nataon'ny amerikana, ireo mpamatsy solosaina (na "ivon-data") zatra mitahiry angona nomerika 1,5% amin'ny herinaratra ao amin'ny firenena. Mpanjifa lehibe indrindra: Google goavambe, tombanana ho antsasaky ny tapitrisa ny mpizara azy (firaketana an'izao tontolo izao), miparitaka erak'izao tontolo izao araka ny tranonkala pingdom.com.
Raha tokony hamela ireo ivon-toerana ireo hangonina eo amoron'ny tanàna, toy ny zava-misy ankehitriny, Google dia mikasa ny "hanangana ivon-tahirin-kevitra manaraka ao amin'ny toerana ahafahan'izy ireo mifandray mora foana amin'ny angovo azo havaozina miantoka ny filàn'ny herin'izy ireo ”, hoy ny mpanoratra ny boky.
Noho izany dia mieritreritra ny ranomasina izy ireo. Nijanona kilometatra vitsivitsy miala ny morontsiraka, nanala ny herin'izy ireo tamin'ny herin'ny rano ny serivera, sahala amin'ny turbines surfes.
Vy amin'ny ranomasina mba hisitrika CO2
Mba hisamborana CO2 be loatra amin'ny atmosfera, ny orinasa Climos dia manolo-kevitra ny hamoaka vovoka vy an-taonina amin'ny ranomasina. Izany dia mety hisy vokany amin'ny fampiroboroboana ny fivoaran'ny fitoplanction, izay mankafy manokana ny gazy karbonika.
Manampy anao ny mpikaroka maro, Climos dia maniry ny hanao an'io fanandramana io amin'ny ambaratonga antonony (10 metatra toradroa). Fa noho izany dia mila ny fifanarahan'ny International Maritime Organisation izay toa tsy toa an'io andrim-panjakana io mbola tsy vonona ny hanome
Angovo ao afovoan'ny volkano
Izy io angamba no fanavaozana hafahafa indrindra amin'izao fotoana izao. Mikaroka anzima afaka mamorona angovo avy amin'ny biomassa, ny Sandia Lab dia tsy nahita zavatra tsara kokoa noho ny mametraka ny pipetany ao am-pon'ny volkano.
Manantena izy fa hahita zavamiaina misy cellulose, fitaovana azo ovaina avy eo ho lasa siramamy - ary noho izany dia lasa etanol, ny solika "maintso", hanaovana etanol "cellulosic". Sandia Lab dia mitady loharanon-karena angovo hafa azo avy amin'ny siramamy novina ho etanol (15% amin'ny famokarana serealy any Etazonia).
Ny laboratoara àry dia nanandrana karazana karazana fako sy fambolena ala. Saingy satria simba ireo fitaovana ireo nandritra ny faritra mpamokatra, dia tsy mihetsika haingana amin'ny fiovana izay iharan'ny izy ireo izy ireo. Mifanohitra amin'izany, ny singa akaikin'ny volkano dia mahatohitra tanteraka.
Mampametra-panontaniana maro anefa ity fandinihana ity: mihevitra fa avela hararaotina ny volkano lehibe, mety ho ampy hamatsiana fiara an-tapitrisany ve ny loharanon-karena voajanahary?
Fitaovana an-trano mifandray amin'ny Internet
After the RFID fridge, afaka hamaritana hoe efa tapitra ny yoghurt, eto ny vata fampangatsiahana maitso. Ny fitaovana dia notsapaina tamin'ny 2006 nandritra ny fandalinana natao teny akaikin'ny Seatle. Amin'ny alàlan'ny puce iray, ny fitaovan'ny trano (vata fampangatsiahana, ny fanasana vilia, ny microwave, sns.) Dia ampifandraisina amin'ny metatra elektrika, izay mifandray amin'ny Internet.
Mandritra izany fotoana izany, ny trano dia mamokatra ampahany amin'ny herinaratra tenany amin'ny alàlan'ny angovo azo havaozina (turbine rivotra, panneaux solaires, sns.). Saingy alaivo an-tsaina izao fa ny vidin'ny herinaratra dia miova amin'ny fotoana tena izy miankina amin'ny famokarana. Vokany: arakaraka ny maha-tsara sy be rivotra ny toetrandro no tsy dia lafo ny herinaratra.
Amin'ity tranga ity dia afaka mampifanaraka ny fanjifany angovo isan'andro ny mponina araka ireo fiovana ireo. Miakatra ve ny vidiny? Ampiakariko kely ny hafanan'ny vata fampangatsiahana. Mbola ho hita eo raha azo atao amin'ny sehatra marobe io fomba io, fortiori any amin'ny toerana izay tsy mahomby ny angovo azo havaozina.
Ballons eny amin'ny lanitra mba hamoronana angovo
Tononkalo kely mikasika ny fanohizana ity lisitra ity. Ny tetik'asa Cool Earth Solar, fanombohana Silicon Valley, dia mikendry ny hamorona "toeram-piompiana balaonina" mitsinkafona eo amin'ny folo metatra ambonin'ny tany. Feno helium izy ireo voarakitra amin'ny sarimihetsika CIGS ary hahatonga ny masoandro ho maro kokoa.
Nefa ny fanombohana dia tsy mijanona ao. Izy io dia manolotra, amin'ny farany, ny mandefa baolina lehibe lavitra kokoa, ankoatry ny rahona, izay misy ny masoandro dia sady matanjaka sy tsy miova hatrany. Ny baolina dia mifandray amin'ny tany, toy ny any amin'ny toeram-piompiana, amin'ny alalan'ny tarika tsotra.
Fitaovana iray mitovy, natao batisa "Turbine rivotra Zeppelin", dia nosedrain'ny Magenn Power tao Ontario ihany koa. Fitsipika mitovy, afa-tsy hoe ny baolina dia verindroa.
Ny fiara elektrônika amin'ny farany dia azo atao
Izy ireo no kintan'ny Frankfurt LoungeNy fiara mandeha amin'ny herinaratra no injeniera kilalao vaovao. Ny fanarenana azy ireo, ny baoty tsotra dia ampy hampifandraisana mivantana amin'ilay fiara (eo amin'ny kapila na amin'ny lafiny araka ny modely).
Inona no vaovao raha oharina amin'ny modely efa namboarina efa ho dimy ambin'ny folo taona lasa izay (avy amin'ny peugeot indrindra)? Batterie compact kokoa miaraka amin'ny elanelam-potoana lava kokoa (150 km izao eo ho eo izao) ary ambonin'izany rehetra izany dia haingana kokoa ny famerenana azy ireo ao anatin'ny adiny iray.
Les fetra ny fiampangana noforonin'ny ben'ny tanànan'i Paris dia mety hampiasaina amin'ny farany: Toyota nanambara ny famotsorana tamin'ny 2010 ny Prius iray izay azo ampidirina ao amin'ilay sehatra toy ny milina fanasan-damba mahazatra. Nanaiky ihany koa ny mpanamboatra io modely io ihany.
Revolisiona Green: Valin'ny Sillicon Valley de Michel Ktitareff - ed. Dunod - 224p. - € 17 - famotsorana 7 Oktobra.
Ny fahagagan'ny fitsaboana ho an'ny fahasalamana tsara
Tantaran'i Afrika (Volume 3)
Ny tsiambaratelon'ny anjely sy ny ambaratonga ambony selestialy
Tsy nisy nitranga ny fanozonana Cham
Iza no tompon'ny Naba?